महाशिवरात्री पर्व किन मनाउने ? के छ यसको विशेषता – NepalayaNews.com
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:४२
ज्योतिषी पण्डित राजेन्द्र खनाल ।
महाशिवरात्री पर्व प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म( चलिआएको -पुरानो धर्म ) मान्नेहरुले मनाउँदै आएको रमाइलो पर्व हो । धर्मशास्त्रमा लेखिए अनुसार महाशिवरात्री पर्व फागुनको कृष्णचतुर्दशी तिथिमा पर्दछ । यसलाई महान पर्वको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले शिवरात्रीको अघिल्तिर महा भन्ने शब्द थपेर महाशिवरात्री पर्व भन्ने गरिएको हो । शिवरात्रीलाई भगवान शिवको रात्रीको रुपमा लिइन्छ । फागुन कृष्णपक्षको चतुर्दशीका दिन शिवको ज्योतिर्लिंग पनि उत्पत्ति भएको दिन मानिन्छ । फाल्गुन महिनामा न प्रचण्ड गर्मी, न दर्के झरीमा नै भिज्नुपर्ने, न हिलो खेल्नुपर्ने, न धूलो नै झेल्नु पर्ने, यतिबेला नै हो मनलाई धर्म, दर्शन, भक्ति र आध्यात्मिक भावमा लगाउनुपर्ने, किनभने भोग-विलासबाट मुक्त भएर आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने बेला हो यो । सृष्टि र प्रकृतिको महत्वलाई पनि बोध गर्ने बेला हो यो फाल्गुण महिना ।
शिवको अर्थ कल्याण हो । त्यसैले भगवान् शिव कल्याणका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, के विनाश वा संहार गर्ने पनि भगवान् हुन सक्छ ? कसैलाई वा कुनै वस्तुलाई नाश गरेर पनि कल्याण हुन्छ र ? संसार परमात्माको अस्तित्वले व्याप्त छ । भगवान् सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ । दिन रात, असल, खराब, कीट, मनुष्य, पशु, वनस्पति सबै भगवद शक्तिकै परिणाम हुन् । त्यसैले, परमात्मा जीवनमा हुनुहुन्छ भने मृत्युमा पनि हुनुहुन्छ, सिर्जनामा हुनुहुन्छ र विनाशमा पनि हुनुहुन्छ । संसारमा मानिसको यदि जन्म मात्रै हुन्थ्यो र कसैको मृत्यु हुँदैनथ्यो भने के हुन्थ्यो होला ? यदि मृत्यु हुँदैनथ्यो भने यो जीवनको के नै महत्व हुन्थ्यो होला र ? बोटबाट समय पुगेका र पहेँला भएका पातहरू नझर्ने हो भने नयाँ पालुवाले कहिले र कहाँ स्थान पाउन सक्छन् ? नयाँको आगमनका लागि पनि पुराना र समय पुगेकाको विनाश वा समाप्ति अनिवार्य आवश्यकता हो, र विनाश पनि एउटा विशुद्ध शक्ति हो । कुनै पनि कुरा समाप्त गर्न शक्ति चाहिन्छ, साहस र हिम्मत चाहिन्छ । संसारका सबै कामहरू विनाशक्ति सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यदि सबै क्रियाका लागि शक्तिको आवश्यकता हुन्छ भने संहारका लागि पनि शक्ति चाहिन्छ । त्यसैले, संहारशक्तिका रूपमा भगवान् शिव पूज्य र बन्दनीय हुनुभएको हो । भगवानका अगाडि सबै दोष, पीडा, भय, असुरक्षा, तनाव र विसङ्गतिहरू पनि कमजोर हुन्छन् । ती सम्पूर्ण नराम्रा शक्तिको प्रभावबाट मुक्त रहन सक्ने क्षमता भएर नै भगवान् शिव कल्याणका देवता मान्न सकिएको हो । शरीरमा खरानी घसेर बस्नु अर्थात् शिवजस्तो हुनु भनेको सान्सारिक सुखबाट टाढा बस्नु भन्ने सन्देशलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै भांग, धतुरो आदि सेबन गर्नु भनेको केही समयका लागि भए पनि तनाबबाट मुक्त हुनु पर्छ भन्ने अर्थमा हो । बाघको छाला ओढ्नु र सर्पको माला लगाउनु भनेको पर्यावरणअनुसार बाँच्न सिक्नु पर्छ, प्रकृतिमा जे मिल्छ त्यसैमा आनन्द लिन सक्नु पर्छ भन्ने हो । शिव स्वरुपको रचना विशिष्ठ एवं अर्थपूर्ण छ । शिवजीको जटालाई वायुमण्डल, त्यसमा सिउरिएको चन्द्रमालाई मन, डमरुलाई ध्वनी एवं संगीतको प्रतीक मानिएको छ ।
त्यस्तै, शिवजीको आकृतिमा समानान्तर तीन वटा आँखा हुन्छन् । बीचको तेस्रो आँखालाई अलौकिक सृष्टिको प्रतीक मानिन्छ । त्रिशुलको तीनवटा शूलले उदय, संरक्षण र विनाशको संकेत गर्छ । सर्पले पर्यवरणमा रहेको विषाक्त पदार्थलाई आफ्नो गलामा समाहित गर्छ । सर्प देख्दा हामी सबैलाई डर लाग्छ तर सर्प यस्तो जनावर हो जुन नहुने हो भने वातावरणमा आउने जति पनि विषाक्त कुराहरु छन् ती सर्पहरुले मात्र धारण गर्न सक्छन् । शिवजीले सर्पको माला लगाउनुको अर्थ पनि पर्यावरणको शुद्धतासँग जोडिएको छ । शिवको परिवारमा चार जना छन् र ती चार जनाका छुट्टाछुट्टै बाहनसहित आठ जनाको परिवार मिलेर बसेको देखिन्छ । सर्प, मुसा, बाघ, मयुर र साँढेलाई पनि एउटै परिवारभित्र मिलाएर राख्न सक्ने शिवजीलाई देवाधिदेव शक्तिशाली महादेवको रुपमा मानिन्छ ।
। नोटः यस वर्षको महाशिवरात्रीको दिन फेब्रुअरी २१ तारिख, फाल्गुन ९ गते शुक्रवार परेको छ । जो जहाँ रहे पनि हामीले आफ्नो सँस्कार तथा चाडपर्वलाई आफू तथा आफ्नो परिवार, साथीभाइलाई चिनाऔं । सँस्कार नै तपाई हाम्रो चिनारी हो, राम्रो सँस्कारले नै हाम्रा बालबच्चाहरु पछि राम्रो संगत फेला पारी सफल हुन्छन् । सँस्कारको अनुशरण आफूबाटै सुरु गरौँ । जुन कुरा सिकाईन्छ त्यो शिक्षा हो भने जुन कुरा हामीले गरेको आधारमा बच्चाहरुमा छाप परेको हुन्छ त्यो सँस्कार हो । जसले गर्दा भोलि अरुले पनि थाहा पाउने छन् यसको महत्वको बारेमा ।
अमेरिकाको डिसी मेट्रो वरपर बस्ने महानुभावहरुको लागि यस वर्षदेखि नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रले पनि शिवरात्री पर्व भव्यरुपमा मनाउने योजना भएकाले यस क्षेत्रमा रहनुहुने सबै जनालाई हार्दिक निमन्त्रणा !
अन्त्यमा महाशिवरात्रीको उपलक्षमा सबै भक्तजनहरुलाई भगवान शिवको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना । इति ।
लेखक ज्योतिषी खनाल बिगत १३ वर्षदेखि वासिंटन डी सी, मेरिल्याण्ड, भर्जिनिया क्षेत्रमा ज्योतिष तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुरोहित काम गर्दै आईरहनु भएको छ ।
सम्पर्क : 703-870-6480) khanalguru@gmail.com
नेपालमा कोरोना भाइरस संंक्रमित चौथो व्यक्ति फेला	१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:१४
सरकारी कम्पनीले बेच्दैछ इन्डक्सन, ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताको चासो	१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १०:३०
के गर्दै छन् त लकडाउनमा अमेरिकाका नेपाली ?	१३ चैत्र २०७६, बिहीबार २१:४६
नेजाले सक्दो सहयोग गर्ने ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:४२
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘मृतकको संख्या एक लाखमा राख्न सके धेरै राम्रो काम हुने’ ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:४२
अमेरिकाले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक लैजान चार्टर जहाज पठाउँदै ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:४२